Faalada Isbuucaan ee Wadanka | KEYDMEDIA ONLINE
Faalada Isbuucaan ee Wadanka
Samatalis Haille — Dad gaaraaya 14, ugu yaraan, aa lagu dilay wadanka Soomaaliya laga soo bilaabo 10kii bishaan, Luuliyo, ilaa 16-da isla bishaas - Tani waa Faaladda Isbuucaan oo uu soo diyaariyay Samatalis Haille.
Dadkaan labo ka mid ah waxaa dilay Shebbaab, markay ku eedeeyeen basaasnimo, meesha labo kalena ay dishay Dowladda Federaalka Soomaaliya, DFS, ka dib markii maxkamad ku heshay inay dileen marwo Jaamici ah.
Labo ka mid ah waxay ahaayeen saraakiil ka kala tirsan nabadsugidda Iyo xoogga dalka Soomaaliyeed. Mid waxaa lagu dilay Xamar Jajab, Xamar, midna Walla Wayn, SH/Hoose.
Bacdamaa madax sare ay ahaayeen, ugu yaraan mid ka mid ah, waardiyena wateen, waxaa macquul ah inay dad kale meesha wax ku noqdeen.
DFS kama howlgalin ilaa Iyo hadda inta sida caamka ah loo og yahay deegaanada ay xarakada Shebaabka ka taliso, walow ay hatsato fursado ay ku howlgali karto, sida Shicibka deegaanada Shebaabka ka taliso qaarkood oo raba inay Shebaabka iska kiciyaan.
Qaabka ugu fiican oy uga howlgali karto waa inay shicibka meelahaas ku dhaqan dhahdaa ka tashada aayihiina oo go'aan ka gaara cidda idin hogaaminaysa Iyo maamul gobeleedka aad ka mid noqonaysiin ama aad unkumaysiin. Bacdina ayaga ka qoroto askar militari, nabad sugid, boolis Iyo laamaha kale ee amniga.
Xarakada Mufsidiinta waa malay, malayna biyo uu u baahanyahay si uu u noolaado. Biyahaas waa shacab aan aayihiisa ka tashan oo saaqiday, oon waxba dan ka lahayn, dulinimo iska ogolaaday, Iyo cadaab aakhirana iska sugaaya sababo la xiriira adduunyo jeclaysi Iyo hogaan la'aan, bacdi waa laga dhex shaqaysanaa.
DFS bacdamaa ay ka leexatay wadadii ahayd dadka haloo daayo aayahooda haka tashadeen, Shuurada Islaamiga ah, talada dadka hala dhex dhigo, way say Diinta qabtee, waa ka leexdeen.
Bacdi waxaa dhacday Shebaab inay helaan shacab aan hogaan haysan, oo jawaab ku filan aan ka bixin karin falalkooda maalin walba dhaca, baabuur qarax ku rakib, dil toos ah, weerar gaadmo ah qaad, jid u gal; shicib iyo hogaan isku duuban hadduu jiri lahaa Wal- Shamsi aa lagu qaadi lahaa sida ka dhacday Puntland and Somaliland, ilaa hadda, waxa soo socda Ilaahay aa yaqaan.
Sidii shicibka talada gacanta loogu galiyay, oo duqa magaalada ay u soo doorteen, magaalada Gaalkacyo dhankeeda waqooyi, golaha deegaanka, dhibkii Shebaab meesha ka waday waa joogsaday.